Wax Ka Ogoow ciidanka Cusub Ee lagu Wareejiyay Amaanka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wax Ka Ogoow ciidanka Cusub Ee lagu Wareejiyay Amaanka Muqdisho
Ahmed weheliye Gaashaan 8 May 2018 9 May 2018
muqdisho ( mareeg news ) Magaalada muqdisho ayaa lagu soo bandhigay ciidama cusub oo isku dhaf ah kuwaas oo la wareegay amaanka caasimada bisha soo socta ee ramadaan.
Raisul wasare kheyre gudoomiya gobolka banaadir Eng yariisow Saraakiisaha ciidamada qalbka sida iyo howlwadeenada wasaarada amniga ayaa ka soo qeeyb galay kormeerka ciidanka muqdisho lagu diyaarinaayay mudooyinkan.
Dowlada soomaaliya ayaa la tacaaleysay falka ka dhanka ah amaanka ee muqdiaho ka dhaca.
sidoo kale diyaar garoiwgan ciidan ee muqdisho ayaa ah mid sanadkiiba bisha ramaadaan laga dareemo caasimada, waxaana lawada qirayaa in dowladu diyaar garoow amni sameeyso bisha ramaadaan iyadoo ka acbsi qabta weerarada alshabaab ee laba jibaarma bisha Ramadaan.
Quburo dhanka amaanka ah oo ay mareeg.com la xuriirtay ayaa sheegay in amaanka caasimada markasta u baahanyahay heegan in loogu jiro si loo xaqiijiyo xasiloonida muqdisho, waxa ay kaloo qubaradu sheegeen in loo baahnyahay guluf ka baaxad weeyn caasimada iyo hareeraheeda ayna tahay in xukuumadu Talaabooyin ciidan ka qaado dhanka Goboloda ay Xarakada al-shaab saldhigyada ku leeyihiin.
Dadaalka dowlada Fedralka oo ah mid ka dhex muuqda ciidanka, ayaa hadana dhaafsiisaneeyn caasimada.
Isbadal cusub oo laga dareemayo Baladweyne +SAWIRO
Ethiopian PM visits Kenya